Yintoni i-IntelPTTEKRecertification EXE? - Faq
Eyona > Faq > Inkonzo yokuphinda kubhengezwe i-Intel-isisombululo
Inkonzo yokuphinda kubhengezwe i-Intel-isisombululo
Yintoni i-IntelPTTEKRecertification EXE?
IntelPTTEKUkuqinisekiswa kwakhona.izembeyinxalenye ye-Intel (R) ye-PTT EK yokuQinisekiswa kwakhona kweeNkonzo kwaye iphuhliswe yi-Intel (R) Corporation ngokweIntelPTTEKUkuqinisekiswa kwakhona.izembeulwazi lwenguqulo.IntelPTTEKUkuqinisekiswa kwakhona.izembeiqhele ukubekwa kwifolda 'C: Program Files \_ Intel \_ iCLS Client \_'.
Molo, le yitape evela kuMicrosoft.
Ndiza kukubonisa indlela onokuchonga ngayo iingxaki eziphezulu ze-CPU phantsi kweWindows Vista 7 Server 2008 kunye no-2008 r2 ngeWindows Performance Toolkit, ekwabizwa ngokuba yingcali, ii-CPUs apha ziphantsi mhlawumbi zilingene mhlawumbi iipesenti ezilikhulu zokusetyenziswa kwezi CPUs Umphathi womsebenzi wenza ukuba uza kubhola apha kwaye ubone ukuba sisi sicelo kwaye lixesha elithile apha sinezinto zethu ezixakekileyo ngamaxesha onke, ke usuka phi apha? Ungacofa ekunene ukwenza ezinye iifayile zokulahla, kodwa kukho indlela elula yokuzisa ingcali kuwe ukuze uyaziqhelanise nenkqubo kwaye ufumane ulwazi olufana nale nkcukacha inqanaba lomsebenzi endinokulibona kule meko inokuthi I-CPU ibiza umsebenzi ukuba ube mnye, zimbini, zintathu, zine, zintlanu kwaye zintandathu kwaye xa umnxeba uphela ufumana ubalo lwethikh kwaye ndiyenza kwilog esebenzisa ixesha lam elininzi le-CPU. Sifumana njani eli nqanaba leenkcukacha? Faka esi sixhobo sekhompyutha ngeWindowsseven SDK, into eya kuyenza kukunyusa isifakeli sewebhu esona silula kodwa faka nje la macandelo kunye nesifakeli kulawulo lwakho lwemigqomo apha ndilapha ukuya kumatshini olandelayo wama-64 ngoko ndifuna fakela izixhobo ze-x64 ukuze uqalise, vele uvule umthetho wokukhawulezisa kwaye ngelixa siqinisekile ukuba i-CPU yethu isenzeka sifuna ukuqhubeka nokuqhuba iiProfayili zewizadi yomyalelo weLatencystack Walk. Ukuba ufumana isilumkiso apha malunga nokukhubaza umphathi we-paging, ungenza kwakhona kwirejista koomatshini beX64 ukuba ixabiso lobhaliso kufuneka lisetelwe ngokuchanekileyo kwaye liqaliswe, kodwa ukuba kunjalo? Ixhala lokuphulukana nokuzala kwakho kwengxaki, qokelela umkhondo kwaye ndiza kukubonisa into ezakubakhona ngaphandle kweck-trace kwaye isenokunceda, ke masiyiyeke le nto okwexeshana, masiqhubeke siyeke trace, ugcine kwiNgcali- Dhigh CPU ETL eya kuthi ithathe umzuzwana ukubhala ukuba sinesilumkiso esincinci apha malunga nolwazi oluchongiweyo oluya kujongeka njengefayile, iindlela, njl.
Ke qhubeka ungakhathazeki, akufuneki ukuba kubi kodwa kufuneka sikulumkise apho ukuze ujonge umkhondo Ungasebenzisa nayiphi na iVista okanye umatshini ophezulu ukujonga umkhondo, kufuneka nje ube ne-intanethi Unxibelelwano lwethu lokusonjululwa kwe icon kunokwenza, kodwa ngokuyintloko yile nto uyifunayo, ngamanye amagama, ungawufumana umkhondo kwikhompyuter enye kwaye uyijonge kwelinye. Akukho ngxaki, ukukhankanya into malunga neesimboli kufuneka ndikubonise apha ukuba umqondiso wam usetelwe kwiserver yesimboli yoluntu Umqondiso wendlela yokwahluka kwendalo ndinendlela yophawu lwendawo yesicelo sokuphindaphindeka kwaye ndineseva yesimboli egcina iwebhu yendawo iisimboli zesikhombisi apha, ke masiqale nge-uch ye-analytics ingcali ye-ICP kuwe ETL iyakukulumkisa ukuba uqala kummiselo womlawuli cofa nje ewe yonke into ngoku nali inqanaba lam elinomdla leenkcukacha apha kwingcali endikhe ndabona ukuba ndinayo Inkqubo enye nganye isebenzisa icandelo elikhulu le-CPU yam ngaphandle kwe-CPU-Samplingby CPU yinxalenye efanelekileyo esifuna ukuya kuyo apha. Ngoku masicofe ekunene kwiLoadsymbols.
Oku kungathatha ixesha njengoko umqondiso wendlela yakho ungangazaliswa ngokupheleleyo Ekunene cofa umbono, cofa ekunene kwitafile yesishwankathelo. Ngoku ukuba isishwankathelo setafile senziwe, apha uyabona ukuba sinoluhlu lweenkqubo ezinokuthi zingabinakholamu yovulo ngokungagqibekanga, ukuba awuveli kwiikholamu ezimbini apha kwaye ujonge, unokuba Imodyuli kunye nomsebenzi kwaye ubeke Makuqinisekiswe ukuba uhlelwa ngokobunzima njengoko benditshilo ngaphambilana ungangabinamkhondo mhle apha njengoko ndinayo kuba kusenokwenzeka ukuba kuye kwafuneka ukuba ubeke umphathi we-paging kwaye awuzange uyenze loo nto, sesinye isizathu kodwa usenokufumana ulwazi apha njengoko ndinemodyuli kunye nomsebenzi apha, njengoko ndizisombulule ii icon, ukuba ndifumane iinkcukacha zenqanaba lokusebenza ezinokwanela ukumakisha umthengi wakho ophezulu we-CPU ngenkqubo ethile, ukuba ubungenayo naziphi na iisimboli zeli teki, esinye isizathu ibisenokuba ubungenazo iisimboli Mhlawumbi ayisiyiyo iMicrosoft yokubini, mhlawumbi ngumsebenzi wesithathu kunye nomntu wesithathu dll ukuze ubone igama lawo njenge-CPU nganye kwaye emva koko ungabona uphawu lombuzo okanye akukho nto apha ngaphandle koo o into ekufuneka uyenze ngolu lwazi ngoku ungaqala ukukhangela uye kwi-bingcom faka la magama e-dll la magama anokusebenziseka aya kukuxelela ngakumbi malunga nokuba abanye abasebenzisi bawubonile lo mbandela ubambiso lubambekayo lubanjiwe Inqaku leMicrosoft KB Oku kunokukunika ulwazi Kuya kufuneka uyilungise le nto endaweni yokuba negama lenkqubo, kutheni kubalulekile? Mhlawumbi awunawo umzekelo olula njengokuphumeza ngokungafaniyo njengeNyama ye-CPU Dot exe onokufumana ngokulula ukuba ngubani ovela kulo, mhlawumbi yenye yeenkomfa ze-SVC kwikhompyuter yakho, i-CPU kunye neenkonzo ezininzi umzekelo ezisetyenzisiweyo? zigcinwe apho, isenokuba ziinkonzo zomntu wesithathu ezingezizo zeMicrosoft okanye inokuba liqela leenkonzo zikaMicrosoft ke kulapho ufuna ukungena khona kwaye into ekufuneka uyenzile kukugcina. Enkosi ngokubukela kunye nethamsanqa ngophando lwakho
Ngaba ikhona enye indlela yokulungisa i-Intel pttek recertification service?
Inkonzo yokuPhindwa kwe-Intel PTTEK isebenzisa phantse i-40% ye-CPU ngalo lonke ixesha kwi-Acer Aspire E5-575G yam. Iyayishiya inkqubo yam. Ngaba ikhona into endinokuyenza ukulungisa le? -Iinkqubo kunye neeMpawu, khipha iNjineli yokuSebenza ye-Intel ethembekileyo. -Zula kwifolda uye kwi Installers TXEI Win10 ifolda.
Kutheni le nto inkonzo ye-Intel PTT Ek yokuphinda usebenzise i-CPU ephezulu?
I-Intel (R) ye-PTT EK yokuQinisekiswa kweNkonzo ngokuPhezulu kwe-CPU. Izolo ndicime i-boot ekhuselekileyo ukulungisa ukuba i-usb bootable yam ayifumanekanga kwaye ndiphinde ndaqala kwakhona kwaye ndaya kwi-bios kwakhona ukutshintsha ukhetho lwe-boot kwi-usb kwaye i-bootable yam ye-USB isebenza ngepropathi.
Kutheni le nto ndifumana inkonzo yokuphinda kumiselwe i-PTT Ek?
Ngokukhawuleza xa ibaleka uyayiva fan ukuba ihamba ngesantya esipheleleyo. Phezulu ekusebenziseni i-CPU ndihlala ndifumana inkqubo ye-Intel PTT EK yokuQinisekiswa kwakhona kweenkonzo nge-25-30% rhoqo. I-UEFI isetelwe kwi-PTT endaweni ye-TPM1.2, kodwa oku kubonakala ngathi kungumba wesoftware. Okwangoku ndiyayibulala inkonzo kuMphathi weSebenzi, kodwa ndicinga ukuba oku kubangela imicimbi ethile.
Iqala nini i-Intelpttekrecertification kwi-PC yam?
Nje ukuba yenziwe yonke into isebenza kakuhle. Ifayile yokubhaliweyo ye-IntelPTTEKRecertification kwi-PC yam ibonisa impazamo yoqhagamshelo: '2017-12-19 09: 42: 13: 389 00000000000026ac IntelPTTEKUkuqinisekiswa kwakhona: ukuqinisekiswa kwakhona kwe-EK kuqalile.